के रेड वाइन पिउनु स्वास्थ्यको लागि फाईदाजनक छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के रेड वाइन पिउनु स्वास्थ्यको लागि फाईदाजनक छ ?
August 9, Sun
के रेड वाइन पिउनु स्वास्थ्यको लागि फाईदाजनक छ ?
मंसिर ८ गते, २०७६ - १७:१६
रक्सीको कारण पुरै विश्वभर प्रत्येक वर्ष दस लाखभन्दा बढि मानिसको ज्यान गएको छ । फेरि पनि मानिस हजारौं वर्षदेखि रक्सी पिउँदै आईरहेका छन् ।
काठमाडौं । पछिल्ला केहि वर्षहरुमा रक्सी स्वास्थ्यको लागि फाईदाजनक भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ । विशेष गरि रेड वाईनलाई । रेड वाईनलाई दिर्घरोगी र मुटुरोगीको लागी फाईदा गर्ने चर्चा पनि चलाईको छ । तर, के मदिरा स्वास्थ्यको लागि साँच्चिकै राम्रो कुरा हो त ?
अध्ययनमा क्यान्सरको कारणमा मदिरा पनि भेटिएको छ । यो अनुसन्धानबाट पुष्टि पनि भईसकेको छ । नियमित धूम्रपान गर्नेलाई भन्दा सातामा एक पटक मदिरा पिउनेलाई क्यान्सरको जोखिम बढि भएको भेटिएको छ । अनुसन्धानले एक पटक मदिरा पिउनु र पाँच पटक चुरोट पिउनु बराबर भएको देखाएको छ । अझ यो महिलाको लागि बढि हानिकारक पनि देखिएको छ ।
ब्रिटेनको पब्लिक हेल्थ विभागका डायरेक्टर तथा रिसर्चर मार्क बेलिस रक्सी स्वास्थ्यको लागि फाईदाजनक भएको भनि रक्सी उत्पादकले नै प्रचार गरेको बताउँछन् । क्यान्सरको लागि जोखिम युक्त पदार्थ रक्सी हो भन्ने कुरा स्वीकारेमा रक्सी उद्योगलाई घाटा हुने कारण त्यसो नभनिएको उनको बुझाई छ ।
रेड वाइन स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक भनि कसले प्रचार गर्यो ?
रेड वाइन पिउनु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ भनि सन् १९७० को दशकमा प्रचार भएको थियो । त्यस समय फ्रान्सका वैज्ञानिकहरुले फ्रान्सका मानिस अन्य देशका भन्दा कम हृदय रोगी भनि पत्ता लगाएका थिए । वैज्ञानिकहरुले हृदयरोगको जोखिम कम हुनुको पछाडि वाईनको कारण भएको बताएका थिए ।
वैज्ञानिकहरुले वजनको समस्याको साथसाथै हृदय रोग, उच्च रक्तचाप र मधुमेहको जोखिम कम गर्न वाइनको भूमिका हुने दाबा गरेका थिए । वैज्ञानिकहरुको गरेको यस दाबीलाई नै विश्वभर प्रचार गरिएको थियो ।
५४ रिसर्चमा घाटा मात्रै देखियो
सन् २००६ मा रक्सीबाट हुने फाईदा या बेफाइदाको विषयमा ५४ खालका बेग्ला बेग्लै अनुसन्धान भएको थियो । अध्ययनमा रक्सी पिउँदा मुटु रोगको जोखिम कम हुने भन्ने कुनै तथ्य फेला परेको थिएन ।
रिसर्चर हेलेना कोनीबियर रक्सी पिउँदा मुटुमा प्रत्यक्ष प्रभाव हुने बताउँछिन् । उनी रक्सी पिउँदा मुटुको प्रेसर अस्वभाविक बढ्ने कारण मुटुरोगको जोखिम पनि बढि हुने बताउँछिन् ।
अनुसन्धानकर्ता बढि रक्सी पिउँदा सिधा कलेजो तथा किड्नीमा समेत जोखिम हुने पनि बताउँछन् । उनिहरुको रक्सीको फाइदा पनि केहि देखिएपनि त्योभन्दा धेरै गुणा बढि बेफाइदा भएको बताउँछन् । (एजेन्सीबाट)
मंसिर ८ गते, २०७६ - १७:१६ मा प्रकाशित
टेकुमा दैनिक ६० देखि ७० जना एचआइभीको औषधि लिन आउने गरेको
रामदेवले बजारमा ल्याए कोरोनाको औषधी, शतप्रतिशत निको हुने दावी
कोरोना सङ्क्रमितलाई हृदयाघात भएमा उपचारका लागि कहाँ जाने ?
मिर्गौला र मुटुको निःशुल्क उपचार सेवा बन्द गर्ने घोषणा
एन्टिबायोटिकको प्रयोगले बढी मृत्यु हुन्छ -डब्ल्यूएचओ
अहिलेको कोरोना संक्रमण दोस्रो वेभ हुनसक्छ : जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डे
कोरोना संक्रमितमा स्वाद र गन्धसमेत थाहा नपाउने लक्षण देखियो
कोरोना संक्रमणबारे जान्नै पर्ने केही तथ्यहरु
कोरोनाबारे विशेष खोज : मानव शरिरमा लुक्न कोरोनाले आफुँलाई गरिरहेको छ परिवर्तन
सेवाग्राहीसँग बढी मूल्य लिएको भेटेपछि मनमोहन अस्पताललाई कारवाही
कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन यी ८ कुरामा सावधानी अपनाऔं
कीटनाशक झोलको प्रयोग : असावधानीले निम्त्याउला जोखिम, सतहलाई डिस–इन्फेक्ट गर्न सकिने !